အမျို.းသမီးများသည် တစ်ပတ်လျှင်သုံးနာရီမျှ ခပ်မြန်မြန် လမ်းလျေက်ခြင်းဖြင်.နှလုံးရောဂါ ဖြစ်နှိင်သည်. အန္တရာယ်မှ ၃၀-ရာခိုင်နှုန်းမှ ၄၀-ရာခိုင်နှုန်း အထိေ | LAMINTAYAR
အမျို.းသမီးများသည် တစ်ပတ်လျှင်သုံးနာရီမျှ ခပ်မြန်မြန် လမ်းလျေက်ခြင်းဖြင်.နှလုံးရောဂါ ဖြစ်နှိင်သည်. အန္တရာယ်မှ ၃၀-ရာခိုင်နှုန်းမှ ၄၀-ရာခိုင်နှုန်း အထိေ
Posted by lamintayar at 8:58 AM Labels: ကျန်းမာရေး .......
အမျို.းသမီးများသည် တစ်ပတ်လျှင်သုံးနာရီမျှ ခပ်မြန်မြန် လမ်းလျေက်ခြင်းဖြင်.နှလုံးရောဂါ ဖြစ်နှိင်သည်. အန္တရာယ်မှ ၃၀-ရာခိုင်နှုန်းမှ ၄၀-ရာခိုင်နှုန်း အထိလျော.ချနှိင်ကြောင်း နယူးအင်္ဂလန် ဆေးဂျာနယ်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
အကယ်လို. လမ်းလျောက်သည်.အချိန် ကိုတိုးမြှင်.မည် သို.မဟုတ် အထိုက်အလျောက် ပြင်းထန်သည်.လေ.ကျင်.ခန်း ကိုလုပ်မည်ဆိုပါက၊ လုပ်သည်နှင်.အမျှ အဆိုပါရောဂါဖြစ်နှိင်ခြေ ပိုမိုလျော.ပါးသွားမည်ဖြစ်သည် ဟု လေ.လာမှု.ကိုဦးဆောင်ပြုလုပ်သူ ဘရစ်ဟန်နှင်. ဘော.စတန်မြို. ၊အမျိုးသမီး ဆေးရုံမှ
ဒေါက်တာ ဂျိုအန်မင်ဆန် ( Dr.Jo Ann Mason) ကပြောပါသည်။
အမျိုးသမီးများသည် ပုံမှန်လမ်းလျောက် ခြင်းဖြင်.နှလုံးတိုက်ခိုက်မှု.ခံရမှု.အန္တရာယ် မှသိသာစွာ လျော.နည်းသွားကြောင်း လေ.လာမှု.အရသိရှိကြရသည်။
အမေရိကန်နှိင်ငံတွင် နှလုံးသွေးကြောနှင်. စပ်လျဉ်းသော ရောဂါများ ဖြစ်ပွားကြသူ သက်လတ်ပိုင်း အရွယ် အမျိုးသမီးအနက်၊ သုံးပုံတစ်ပုံ သည်ကိုယ်လက်လှုပ်ရှာှးမှု. မပြုလုပ်ကြသူများ ဖြစ်သည်ဟု မင်ဆန် (Dr.JoAnn Manson) နှင်. သူ၏အဖွဲ.က ခန်.မှန်းပြောဆိုသည်။
အသကိ၄၅-နှစ်နှင်.၆၄ -နှစ်ကြား ရှိ အမေရိကန်အမျိုးသမီး ၇၄,၀၀၀-ခန်.သည် နှစ်စဉ် နှလုံးတိုက်ခိုက်ခံရလျက်ရှိကြောင်း အမေရိကန် နှလုံးရောဂါ အသင်း၏ထုတ်ပြန် ချက်များအရသိရှိရသည်။
ဆရာဝန်များသည် လေ.ကျင်.ခန်းပြုလုပ်ခြင်းဖြင်.၊နှလူံးရောဂါ ဝေဒနာမှကင်းဝေးနှိင်ကြောင်း နှစ်ပေါင်းများစွာကပင် သိရှိခဲ.ကြပြီးဖြစ်သည်။ သို.သော်များစွာသော သုတေသန ပြုမှုတို.မှာ ယောကျာင်္းများအပေါတွင် အခြေခံ ခဲ.သည်။ ထို.ပြင် လမ်းလျောက် ခြင်းသည် လေ.ကျင်.ခန်း လုပ်မှုမျိုးကဲ.သို.အကျိုးရှိမရှိအပေါ ခွဲခြားစိတ်ဖြာခဲ.ခြငိး မရှိချေ၊
သို.ကြောင်. မင်ဆန် (Dr .Jo Ann Manson) နှင်.အဖွဲ.သည် ၁၉၇၆-ခုနှစ် မှစပြီး မှတ်ပုံတင်ထားသော အမျိုးသမီး သူနာပြုဆရာမပေါင်း ၁၂၁၀၀၀-၏ အချက်အလက် များအပေါ ကျန်းမာရေးလေ.လာမှု. ဟူသော အမည်ဖြင်. သုတေသန ပြုခဲ.ခြင်းဖြစ်သည်။
ယင်းလေ.လာမှု.အရ လေ.ကျင်.ခန်းပြုလုပ်သည်.အချိန်သည် အရေးကြီးကြောင်းတွေ.ရှိသည် အရေးကြီးကြောင်း တွေ.ရှိကြရသည်။
အကယ်လို. အမျိုးသမိးတစ်ဦးသည် တစ်ပတ်လျှင် သုံးနာရီအထိ၊ တစ်နာရီသုံးမိုင်နှုန်း လမ်းလျောက်မည်ဆိုလျှင် လေ.ကျင်.ခန်း မလုပ်သူများထက်နှလံုး တိုက်ခိုက် ခံရမှု.နှင်. သေဆုံးမှု ၃၀ရာခိုင်နှုန်းလျော.နည်းလျော.နည်းသွားကြောင်းတွေရှိရသည်.။
ထို.ပြင် အမျိုးသမီး တစ်ယောက်သည် တစ်ပတ်လျင် သုံးနာရီထက်ပိုပြီး လျှေက်မည် ဆိုလျင် နောက်ထပ် ငါးရာခိုင်နှုန်း ၊ ယင်း အန္တရာယ် မှလျော.ကျသွားကြောင်း တွေ.ရှိရသည်။
လမ်းလျောက်သည်. အမြန်နှုန်းမှာလည်းအရေးကြီးကြောင်းတွေရှိရသည်။ အမျိုးသမီး သည်သက်တောင်.သက်သာဖြင်.တစ်နာရီ လျင် နှစ်မိုင်နှုန်းထက် လျော.နည်းသော နှုန်းဖြင်.လျောက်ပါက၊ ၂၅ -ရာခိုင်နှုန်းအန္တရာယ်မှ လျော.နည်းပြီး၊ အကယ်လိုယ. ၃မိုင်နှုန်း သို.မဟုတ် ထိုထက်ပိုပါက ၃၆- ရာခိုက်နှုန်း လျော.နည်းသွားကြောင်း တွေ.ကြရသည်။
သုတေသီများ၏ ရှင်းလင်းချက်တွင် ခပ်မြန်မြန် လမ်းလျောက်ခြင်းနှင်.အင်အား ပိုသုံးရသော လေ.ကျင်.ခန်း ပြုလုပ်ခြင်းတို.၏ အကျိုးကျေးဇူး အရာတွင် တူညီမှုရှိမရှိ ကိုမှု ကွဲပြားစွာ ခွဲံခြားဖော်ပြခြင်းမရှိပေ။ ကျွန်တော်.တွင် စာရေးတဲ.အားနည်းချက်ရှိတာရယ်မအားတာရယ်ကြောင်. ဖတ်ဖြစ်သောစာအုပ် ကလေးများမှ ကျွန်တော်ဘလော.ရောက်ရှိကြသော မိတ်ဆွေများ ကျန်းမာစေခြင်း အလိုငှာ ဝေငှလိုက်ပါတယ် နောက်လဲ ကျန်းမာရေးနဲ. ပတ်သတ်တဲ.post လေးများတင်ဖြစ်အောင် လုပ်နေပါတယ် ပျော်ရွင်ချမ်းမြေ.ကြပါစေ ...
သဒ္ဓါလှိုင်း June 24, 2010 at 11:43 PM
အမလင့်ထဲမှာ အသစ်တက်တာမတွေ့လို့ မဖတ်ရဘူး.။ ခုဝင်ကြည့်တော့မှ